जुनियाँ गाविसका ३९ घरधुरी दलितमा एक जना पनि एसएलसी गर्ने छैनन् ! – ebaglung.com
जुनियाँ गाविसका ३९ घरधुरी दलितमा एक जना पनि एसएलसी गर्ने छैनन् !
२०७३ माघ ५, बुधबार १९:०४	Footer Slider, Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७३ माघ ५ । गुल्मीको जुनियाँ गाविसको एक वडामा रहेका ३९ घरधुरी दलित परिवारमा एसएली पास गर्ने एक जना पनि छैनन् ।
जुनियाँ गाविस वडा नम्वर–८ चिदीपानी सालघारीका पुरै बिश्वकर्मा जातीका दलित समुदायमा अहिले सम्म एसएलसी पास गरेका एक जना पनि नभएको स्थानिय दलित अगुवा नरबहादुर बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।
तस्वीरः जुनियाँ गाउँमा सवै भन्दा बढि पढ्दै गरेकी निशा बिक यति सम्म त पढे । वुवा हुनुहुन्न अव आमाले यो भन्दा बढि पढाउन मुस्कील छ भन्दै रुदै
छोरा/छोरीको निम्तोमा विदेश घुम्न ९० वर्षको उमेरमा एमआरपी !
अध्यक्ष मल्लले भने-तीन महिनाभित्र डाइलिसिस सेवा, गरीवका लागि नि:शुल्क उपचार !